ရထားဖြင့်တစ်ယောက်တည်းဥရောပခရီးသွားများအတွက်သိကောင်းစရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ရထားဖြင့်တစ်ယောက်တည်းဥရောပခရီးသွားများအတွက်သိကောင်းစရာများ
ရထားဥရောပခရီးသွားလာအလှဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်, ကမ်ဘာပျေါတှငျသာယာလှပနှင့်ယဉ်ကျေးမှုခရီး. သငျသညျသစ်ကိုနဲ့တူအဓိကဥရောပမြို့ကြီးများအကြားတိုက်ရိုက်ရထားရှာနေရှိမရှိ အမ်စတာဒမ်မှလန်ဒန် သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်ရထားသို့မဟုတ် ရင်ခုန်စရာရထားခရီး, ဥရောပရထားခရီးသွားကအားလုံးကိုရှိပါတယ်.
လူများ၏အရေအတွက်မှာ interrailing ဥရောပတဆင့်နှစ်စဉ်သည် 400,000 လူထု. သငျသညျကိုကျော်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် 30 interrailing လက်မှတ်တွေကို အသုံးပြု. နိုင်ငံအများ. interrailing စတင်ခဲ့ကတည်းက 1972, လူသန်းပေါင်းများစွာကဒီတစ်ခုတည်းရထားလမ်းလက်မှတ်ကိုသုံးပြီးဥရောပမှတဆင့်ခရီးထွက်ခဲ့ကြ.
တစ်ခုတည်းလက်မှတ်နှင့်အတူဥရောပတလွှားခရီးသွားလာယင်း၏အကောင်းအဆိုး cons နှင့်တကွကြွလာ. အွန်လိုင်းဆက်ကပ်အပ်နှံထားအများအပြားဆိုဒ်များရှိပါတယ် ခရီးသွားများအတွက်အကြံပေးချက်များ ရထားဥရောပမြင်ချင်သူကို. ဤဆိုဒ်များပါဝင်သည် လမ်းကြောင်းစီမံ apps များ ပေါ်တွင်သင်အကြံပေးချက်များပူဇော်ကြောင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ / ဘလော့ဂ်များ ဘယ်လိုဘတ်ဂျက်မှ.
ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ဥရောပတဆင့်ခရီးသွားလာတစ်ဦးရှိပါတယ် အကျိုးအမြတ်တွေအများကြီး. သင်ကိုယ်တိုင်ဖွငျ့တဲ့အခါ, သင်သည်သင်၏ကျော်ပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုများ ခရီးသွားခြင်း.
တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်းသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခရီးစဉ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများပေးသည်, သင်အလိုရှိသမျှအစားအစာကိုစား သင်လိုချင်သောအခါနှင့်သင်၏ခရီးနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားလူများနှင့်စကားများရန်ဖြစ်ခြင်းမှရှောင်ရှားပါ,
ထိုကဲ့သို့သောလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလူသစ်နှင့်အခြားဖြစ်လျက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖို့ပို Self-ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်အခွင့်အလမ်းဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်, ကိုယ့်ကိုကိုယ် reinventing နေတုန်း. ဤ တစ်ကိုယ်တော်အတွေ့အကြုံကို Self-ကြီးထွားစေနိုင်သည်.
အက်ဆင်း Hanover မှရထား
Bonn Hanover မှရထား
လူဇင်ဘတ် Hanover မှရထား
သငျသညျသွားလာသည့်အခါသင်တို့နှင့်အတူရှိမိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိခြင်း, နှင့်သင်၏အမှတ်တရများဝေမျှဖို့သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုပေးသည်, ဥရောပတဆင့်ခရီးသွားလာ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အရာဖြစ်ပါသည်.
ဘော်ဒါဆောင်တစ်ကိုယ်တော်ဥရောပမှတဆင့်ခရီးသွားလာနေသောသူတွေကိုနှငျ့ပွညျ့စုံနေကြတယ်, ဒါကြောင့် သွားလာခြင်း နဲ့လူနဲ့တွေ့ဆုံ.
အဖြစ်ဖော်ရွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါ နဲ့အထွက်သင်တစ်ဦးတည်းခရီးသွားနိုငျသောအခါအဖြစ်နှင့်သင်တစ်ဦးလူကန်လန်လူတစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင်, သင်သည်အခြားခရီးသွားများအတွက်မှဖော်ရွေဖြစ်အပိုအားထုတ်မှု၌ထားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ဒါဟာပိုပြီးပွင့်လင်းဖော်ရွေဖြစ်ခြင်းဖို့အသုံးပြုရမယ့်ရက်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်, သငျသညျခငျြးမြားနဲ့ခရီးသွားတွေဆက်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ start အဖြစ်ပေမယ့်သင့်ရဲ့အချိန်ရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မည်.
ဒါဟာအစအတွက်အစားအစာများချက်ပြုတ်ရန်အကြံပြုသည် ဘော်ဒါဆောင်, အခြားသူများနှင့်အပြန်အလှန်ပိုမိုအခွင့်အလမ်းများပေးမည့်.
သင်သည်အခြားခရီးသွားများထက်ဒေသခံများတွေ့ဆုံပိုမိုစိတ်ဝင်စားလျှင်, ထို့နောက် Couchsurfing သင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦး option ကိုဖြစ်နိုင်.
Couchsurfing, သော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် meetups ပါဝင်သည် အရက်ဆိုင်နှင့်အရက်ဆိုင်ဒေသခံယဉ်ကျေးမှုရန်သင့်အားချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ် လည်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်.
ခါးပိုက်နှိုက်နှင့်ယူရှာဖွေနေစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ရာဇဝတ်ကောင်၏အခြားအမျိုးအစားများကိုအများကြီးရှိပါတယ်ရှိရာအချို့သောဥရောပမြို့ကြီးများရှိပါတယ် အားသာချက် ခရီးသွားဧည့်များ၏, သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘုံသဘောမျိုးသုံးပါနှင့်လည်းရှောင်ရှားရန်နေရာများနှင့်လူဦးကြည့်ဖို့ခရီးသွားလာဖိုရမ်များသို့မဟုတ်အခြားသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကိုဖတ်ရှု.
အကောင်းဆုံးကိုဈေးနှုန်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့မှဥရောပရဲ့ login မှတဆင့်သွားလာတွေ့ရှိရန် က်ဘ်ဆိုက် ယခု. ယူ3ရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်ပြီးမြောက်ရန်မိနစ်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/tips-for-traveling-europe-alone-by-train/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများမှ / fr အတွက် / ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ်.
#ခြေသလုံး ရထားခရီးသွား traveltips